MacBook Air 2018 mahazo fanavaozana macOS Mojave manokana | Avy amin'ny mac aho
Nanomboka ny 7 novambra lasa teo, Apple dia nanolotra an'izao tontolo izao, ilay taranaka vaovaon'ilay malaza, antsoina hoe MacBook Air, solosaina findainy iray izay nohavaozina tanteraka taorian'ny fiandrasana taona maro izay toa nanondro fa ny orinasa monina any Cupertino dia nandao azy tanteraka.
Raha efa mankafy an'ity maodely vaovao ity ianao dia azo inoana fa nahasarika ny sainao fa iray amin'ireo olona vitsivitsy manana ianao fanavaozana miandry ny fisintomana sy ny fametrahana. Toa namoaka fanavaozana fanampiny ny macOS 10.14.1 ho an'ny MacBook Air manokana i Apple.
Apple dia tsy manome ny antsipirian'ny fanavaozana fanampiny ho an'ny MacBook Air, fanavaozana izany Izy io dia mitana 1.46 GB ary araka ny famaritana dia manatsara ny fahamarinan-toerana sy ny fahombiazan'ny MacBook Air 2018 ary apetraka ho an'ny mpampiasa rehetra manana an'ity maodely vaovao ity. Raha heverina fa ny Airs vaovao dia manana macOS Mojave 10.14.1 efa napetraka mialoha, ny mpampiasa rehetra izay mividy ity fitaovana ity dia tsy maintsy manavao ity fanampiana ity raha vantany vao esorin'izy ireo ao anaty boaty ireo fitaovana.
Ny fomba tsy anoloran'i Apple antsipiriany momba izay ao anatin'ity fanavaozana ity dia manome antsika antony haminavina. Azo inoana, ity patch ity, satria tsy te hiantso azy i Apple, manamboatra bug hafa izay no hita tato ho ato. Azo atao koa ny mampiditra fanavaozam-baovao izay tsy tratry ny orinasa.
Tamin'ny famoahana macOS Mojave, ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanova ny fomba fanavaozana ny fitaovana. Mandra-pahatongan'ny macOS High Sierra dia tsy maintsy nosokafanay ny Mac App Store ary kitiho ny fanavaozana. Miaraka amin'ny macOS Mojave hametrahana fanavaozana dia tsy maintsy mankany isika System Preferensi ary kitiho ny fanavaozana, izay aseho ireo fanavaozana rindrambaiko rehetra misy amin'ny fotoana rehetra ho an'ny ekipanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » MacBook Air 2018 mahazo fanavaozana macOS Mojave manokana
iFixit dia manome isa 3 amin'ny 10 ho an'ny MacBook Air vaovao
Ahoana ny fanitarana ny fahatsiarovana RAM an'ny Mac Mini 2018